Eritereya oo lagu eedeeyay xad gudub - BBC Somali
Eritereya oo lagu eedeeyay xad gudub
Image caption Eritereya waa dalka sedaxaad ee dadka ugu badan ay ka cararayaan oo ay gaarayaan Yurub
Tiro aad u badan oo ka mid ah dhallinyarada ka qaxeysa qasabka dalka Eritereya ayaa hay’adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International waxa ay ku tilmaamtay in arrintaasi ay sii xumeyneyso dhibaatada qaxootiga caalamka.
Warbixin cusub ee hay’adda ay soo saartay waxa ay dhigeysaa in Eritereya ay noqotay dalka sedaxaad ee qaxootiga ugu ay ka baxsanayaan ee ay gaarayaan qaaradda Yurub.
Waxa ay hay’adda intaasi raacisay in diidmada codsigooda megengelya doonka ah ay aad usoo badaneyso.
Hay’adda amnesty waxa ay beesha caalamka waydiisaneysaa inay dhibaatada ka socota dalka Eriteriya u aqoonsadaan inay tahay arrin si cad uga soo horjeeda xuquuqda aadanaha.
Hay’adda waxa ay tilmaameysaa in tababarka ciidannimo ee qasabka ah inay tahay sababta ugu weyn ee dhallinyaro badan ay dalkaasi ugu qaxaayaan.
Intooda bandanna safao sharcidaro ah ayey galaan oo sababa inay dhibaato kala kulmaan saxaraha iyo badda inta ay kusii jeedaan Yurub.
Dadka qaar ee dalkaasi ka qaxay waxa ay hay’adda Amnesty uga warrameen xaaladaha xun ee ay ku shaqeeyaan dadka qasabka lagu ciidameeyay iyo ciqaabta military ee uu lakulmo qofkastaa la qabto asigoo baxsad ah.
Marka la eego warbixin ay Qaramada Midoobeey soo saartay horraantii sanadkan, waxaa lagu sheegay in qasbidda dhallinyarada ee Eriteriya ay sababto shaqa xumo iyo mushaar yari oo ah 40 bollar bishii.
Dowladda Eriteriya ayaa eedahaasi beenisay, waxayna ku qeexday tallaabo lagu curyaaminaayo “hormarka dalka ka socda”.
Iyadoo Yurub ay la kulmeyso caqabadaha qulqulka qaxootiga ee dunida oo dhan ka kala socda, Amnesty waxa ay sheegeysaa in qaxootiga ay xuquuq u leeyihiin inay helaan badbaadin caalami ah, in dib loogu celiyo dalalkoodana ay mustaqbalkooda sii xumeyneyso.
Madaxweynaha dalka faransiiska, Francois Hollande dhowaantan waxa uu sheegay in hogaamiyayaasha Eriteriya looga baahan yahay inay cadaadiska siyaasadeed yareeyaan si qaxa loo joojiyo.